Fitsarana Tampony any Rosia: Fikambanan’ny Vavolombelon’i Jehovah any Abinsk
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Anglisy Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Danoà Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Grika Géorgien Holandey Hongroà Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kinyarwanda Koreanina Kroaty Litoanianina Malagasy Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Norvezianina Poloney Portogey Romanianina Rosianina Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tiorka Tseky Xhosa Zoloa Éwé
Efitrano Fanjakan’ny Vavolombelon’i Jehovah any Abinsk
4 AOGOSITRA 2015
Hodinihin’ny Fitsarana Tampony any Rosia ny Raharaha Momba ny LRO any Abinsk
Amin’ny 5 Aogositra 2015 ny Fitsarana Tampon’ny Federasionan’i Rosia no hitsara an’ilay raharaha momba ny LRO, na ny Fikambanana Ara-pivavahan’ny Vavolombelon’i Jehovah, any Abinsk. Nofoanan’ny manam-pahefana tany Abinsk mantsy ny LRO tany, ary mitovy amin’ny paikady nanafoanana ny LRO tany Taganrog sy Samara ihany no nampiasainy tamin’izany.
Tsy marim-pototra ny nanafoanana an’ilay fikambanana
Misy 100 eo ho eo no anisan’ny fiangonan’ny Vavolombelon’i Jehovah any Abinsk, ary efa zokiolona ny sasany amin’izy ireo. Tamin’ny Novambra 1999 no voasoratra ara-dalàna ny LRO tany, ary izy io no tompon’ny Efitrano Fanjakana ivorian’ny Vavolombelon’i Jehovah ao amin’io faritra io.
Nampangain’ny manam-pahefana hoe nandika lalàna ny Vavolombelon’i Jehovah roa tany Abinsk tamin’ny Desambra 2012, ary avy eo tamin’ny Oktobra 2013. Nizara boky efa nolazaina hoe mampidi-doza, hono, izy ireo. Tsy mitombina ilay fiampangana, satria samy tsy mpikambana ao amin’ny LRO any Abinsk izy roa lahy, fa mivory ao amin’ny fiangonana any fotsiny. Tsy noraharahain’ilay mpampanoa lalàna anefa izany, fa mbola nampiasainy hanafoanana ny LRO ihany.
Noho io fiampangana tsy marim-pototra io, dia namoaka didy ny Tribonaly any Krasnodar tamin’ny 4 Martsa 2015 fa ‘mampidi-doza ny Fikambanana Ara-pivavahan’ny Vavolombelon’i Jehovah any Abinsk, ary tokony hofoanana sy hesorina ao amin’ny Lisitry ny Fikambanana Voasoratra Ara-panjakana.’ Nilaza koa ilay tribonaly fa lasa fananan’ny fanjakana ny Efitrano Fanjakana any Abinsk. Raha manaiky an’io didy io ny Fitsarana Tampony, dia tsy hanana toeram-pivavahana intsony ny Vavolombelona any Abinsk.
Mitovy ihany ny paikady nampiasainy
Ilay Lalàna Hanoherana ny Fikambanana Mahery Fihetsika no nampiasain’ny manam-pahefana tany Taganrog sy Samara mba hanafoanana ny LRO tany. Mbola io lalàna io ihany no nampiasain’ny manam-pahefana tany Abinsk. Tsy marim-pototra mihitsy anefa ilay fiampangana hoe mahery fihetsika sy mampidi-doza ny fikambanan’ny Vavolombelon’i Jehovah. Mbola miady mafy any amin’ny fitsarana izao ny Vavolombelona any Taganrog sy Samara. Efa nitory tany amin’ny Fitsarana Eoropeanina Momba ny Zon’olombelona izy ireo, mba hiarovana ny zony hanaraka ny fivavahany.
Tsy kivy ny Vavolombelon’i Jehovah any Abinsk
Mbola hivory sy hitory ary hanao ny zavatra fanaony, toy ny namany eran-tany foana ny Vavolombelona any Abinsk. Manantena ny Vavolombelon’i Jehovah fa hanao ny rariny ny Fitsarana Tampon’ny Federasionan’i Rosia, ka hamela an’ireo Vavolombelona any Abinsk hivory amim-pilaminana ao amin’ny toeram-pivavahany.
Hahita Olana ny Vavolombelon’i Jehovah any Rosia Noho ny Didy Navoakan’ny Fitsarana Tampony
Nofoanan’ny Fitsarana Tampony ny Fikambanan’ny Vavolombelon’i Jehovah any Samara